Garowe(SONNA) Hadalkan uu jeediyay madaxweyne C/weli Gaas ayaa ka dambeeyey markii uu la kulmay Guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta gaaray magaalada Garoowe,kuwaasi oo markii ay gaareen magaalada Garoowe soo dhaweeyey madaxda Dowlad Goboleedka Puntland iyagoo si wada jir ah saxaafadda ula hadlay kadib kulan ay ku yeeshey madaxtooyada Garoowe.
Madaxweynaha Puntland iyo Guddoomiyaha Golaha Wakiilada ee Puntland ayaa soo dhaweeyey imaatinka wafuudaasi iyagoo sheegay in muhiimad gaar ah ay leedahay wadashaqeynta hay’adaha Dowladda Heer Federaal iyoi heer maamul Goboleed.
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo u mahad celiyay madaxda maamulka Puntland ayaa sheegay in Golaha Aqalka sare uu xiriir gaar ah la yeelan doono baarlamaanka Dowlad goboleedyada.
Ugu dambeyntii Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaar ayaa u mahad celiyay madaxda iyo Shacabka Dowlad goboleedka Puntland sida ay ugu soo dhoweeyeen magaaladda garoowe,wuxuuna muujiyay in ay diyaar u yihiin Golaha Shacabka in la iska kaashado horumarinta danaha umadda Soomaaliyeed.
Previous articleTababarka tababarayasha kubadda Gacanta Soomaaliya oo Djibouti lagu soo xiray
Next articleGuddoomiyaha G/banaadir oo tababar usoo xiray maamulada Degmooyinka Gobolka “Sawirro”